I-Black Mesa eduze kwase-Ullswater, eLake District
Stainton, England, i-United Kingdom
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Andrew
Itholakala edolobhaneni laseStainton emaphethelweni eLake District. Imizuzu emi-5 kuphela ukusuka ePenrith, imizuzu eyi-10 ukusuka e-Ullswater kanye nemizuzu engama-20 ukusuka eKeswick!
Sihlala kwamakhelwane ngakho uma unemibuzo noma izinkinga singakusiza ngokushesha!
I-Black Mesa iyindlu evalekile enendawo yangasese yangasese kanye nendawo engadini ehlukene eduze nezinkukhu zethu ukuze zisetshenziswe yizinja.
Phansi kukhona ikhishi elinomshini wekhofi, umshini wokugeza izitsha, umshini wokuwasha, i-microwave, iketela, i-toaster nesiqandisi sefriji. Igumbi lokuhlala line-TV engu-32'' ene-FireStick futhi linombhede osofa owengeziwe wezinhlelo zokulala ezivumelana nezimo. Igumbi lokudlela linesitebhisi esihle se-oki futhi linetafula nezihlalo ezinwebekayo zabantu abane.
Phezulu kukhona ikamelo lokulala elikhulu elinombhede wenkosi nombhede osofa ababili. Igumbi lokulala line-en-suite eneshawa phezu kokugeza. Ku-en-suite kukhona nesokhethi yokushefa nokukhanya ngaphezu kukasinki.
Isihlalo esiphezulu, izitebhisi kanye nombhede wokuhamba onamacansi ombhede otholakalayo. Sicela usazise uma uwadinga.
4.99 ·85 okushiwo abanye
I-Stainton ine-pub ethandekayo engumakhelwane wesitolo sedolobhana kanye ne-Post Office. Ihholo ledolobhana libamba imicimbi eminingi ehlanganisa imakethe yanyanga zonke yabalimi kanye nekhefi.
I-Rheged Center ikude ngemizuzu embalwa futhi bavame ukuba nemicimbi efana ne-Cumbria Life Home & Garden Show. Futhi banesikrini esikhulu sesinema, ezinye izitolo ezinhle, igalari, umdlalo othambile namakhefi.
I-Ullswater iyimizuzu eyi-10 kuphela yokushayela. Kuyichibi elihle futhi singancoma ukuhamba ingxenye noma yonke i-Ullswater Way ukuze uthole ukubukwa okuhle kwechibi.
Sihlala kwamakhelwane kuphela ngakho kulula ukusibamba. Uma sisemsebenzini noma singekho sizokunikeza izinombolo zethu zomakhalekhukhwini ukuze usibambe.
Hlola ezinye izinketho ezise- Stainton namaphethelo